NOOCYADA DHAQANKA DHIRTA FOOXA EE SII KORDHAYA: SAWIR, SHARAXAAD, DARYEELKA, GURYAHA, CODSIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Foxtail Meadow: Beerto iyo daryeelida dhaqanka
Warshad miro ah oo la yiraahdo Foxtail ayaa muddo dheer u dhisnayd sidii qof aan degenayn oo ka mid ah gobollada cimilada qabooba iyo diirran, kuwaa oo guryahooda muddo dheer lagu isticmaalay dhinacyo kala duwan ee hawlaha bani-aadanka.
Foxtail Meadow (Alopecurus Pratensis) waxaa loola jeedaa badarka firileyda ah, gaadho dhererka qiyaastii 50-110 cm. Bush caleenta cagaaran, wuxuu leeyahay xididada dheer ee duugoobay. Mishiinnada ayaa kor u kacsan, waxay leeyihiin dusha sare. Intaa waxaa dheer in caleemaha generative, caleemaha yar yar oo leh caleenta ku filan dherer dheer ayaa sidoo kale laga yaabaa in ku yaal on baadiyaha qaangaar ah. Caleenta dhirta waxaa lagu daraa, cidhiidhi, cagaar mugdi ah, gaari dherer ah 25 cm.
Foxtail wuxuu bilaabmaa inuu Bloom ee June, iyo beeritaanka bislaadaan dhacdaa July. Tan iyo markii uu kala baxo 4-5 ilaa 7-8 subaxdii, markaa waxaa iska leh tirada "badarka subaxdii." Ubadka waxaa lagu soo bandhigaa qaab ka mid ah baqshiimadaa cylindrical ah, kaas oo leh jilco grayish ah. Dhererka inflorescence waa 10-12 cm.
Ma taqaanaa? Foxtail waxaa lagu soo bandhigay dhaqanka dhammaadkii qarnigii 18aad, si kastaba ha ahaatee, waxa uu noqday mid caan ah oo loo yaqaanay warshad wax soo saartay qarnigii 20aad.
Xidibku wuxuu ka kooban yahay tiro farabadan oo leh qaab wayn oo loo yaqaan 'eliptical'. Midhaha waxaa lagu soo bandhigaa qaabka cariishadaha curyaaminta, oo leh dherer 4-6 mm. Foxtail wuxuu bilaabmaa inuu midho dhalo sannadka labaad ka dib marka la furo, pollination inta badan wuxuu dhacaa dabaysha. Wakhtiga firileyda ubaxa - 13-17 maalmood.
Ma taqaanaa? Warshadda waxay heshay magacan sababtoo ah muuqaalkeeda iyo muuqaalkeeda muddada ubax, sida muuqaalkani muuqaal ahaan u muuqdaan daboolka dawacada sababtoo ah tirada badan ee istaarijiyada.
Caan ka mid ah geedkaan ayaa ku jira xaqiiqda ah in loo adeegsan karo qaybo kala duwan oo ah hawlaha bini-aadamka.
Cawska noocan oo kale ah waa bilawgii Bisaylkiisa waxaana uu heley qaybin wanaagsan sida xoolaha. Thanks quudinta wanaagsan iyo dheefshiidka xayawaanku si fudud ayey u cunaan, inta ay helayaan fitamiinada iyo macdanta lagama maarmaanka ah. Wixii foxtail ah oo ka mid ah cawska ugu fiican.
Foxtail qoyan waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu abuuro daaqsi daaqsi ah, oo lagu daro bluegrass cows, fescue (meadho, bulu-cawl ama casaan), cawska boodhka, cawska timo, qoryaha iyo cawska sariirta.
Warshadani waxay soo saartaa hay "aad u fiican, taas oo aan ka liidato tayada dhaqamada kale ee xulashada leh. Harvest waa in ay ahaataa bilawga ah ee firida ubax. Tan ugu fiican ee dhan hay waxay ku habboon tahay lo'da, wax yar ka sii badana idaha iyo riyaha.
Daawada, foxtail waxaa inta badan loo isticmaalaa diyaarinta decoctions kala duwan oo ka caawiya daaweynta noocyada kala duwan ee cudurada. Haddii aad ka walwalsan tahay cudurka cagaarshowga ama cudurrada maqaarka, ka dibna maydhashada laga soo bilaabo dalaggu wuxuu kaa caawin doonaa sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah wuxuuna soo saari doonaa saameyn tayo leh. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa dawo yar yar oo hargab ah.
Xaaladaha bogsashada ee warshadani waxay sidoo kale muujiyeen wareegga dhiigga oo kor u kacay iyo xoojinta xoojinta. Intaas waxaa dheer, guud ahaan wuxuu xoojiyaa nidaamka wareegga dadka oo dhan.
Haddii aad xiiseyneyso sida loo sameeyo beertaada aan caadi ahayn oo soo jiidasho leh, ka dibna waxaa hubaal ah in lagu caawin doono isticmaalka qoob-ka-shaqeeyaha. Waxay si fiican u socotaa firileyda kale, sameynta naqshadeynta boodhka beerta oo dhan iyo xarrago leh. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa naqshadaha xuduudaha, sawirrada shakhsiyeed, sariiraha ubaxa iyo cawska.
Ha ilaawin siriyadan markaad abuurayso bucshiraadyo kala duwan - waxay si fiican u buuxin doontaa halabuurka, taas oo siinaysa qaab aan caadi ahayn iyo muuqaal. Badanaa, foxtail waxaa loo isticmaalaa in la sameeyo caws, oo ay ku jiraan kuwa isboortiga.
Dhirta badarka, oo ay ku jiraan foxtail, waxaa loo isticmaalaa in la naqshadeeyo cidhifka sariiraha ubaxa iyo waddooyinka beerta, dabaylaha dhagaxyada, xargaha alpine iyo isku dhafanaanta. Warshadani waxay ku dari kartaa raaxo-daro gaaban ama pergolas.
Foxtail cagaaran waa wax aan qabyo ahayn, laakiin waqti isku mid ah oo aad u baahday warshad. Waxay u baahan tahay daryeel habboon iyo xaalado degaan oo qaar ah.
Doorashada carrada iyo goobta
Soil ayaa loo baahan yahay waa in la miiro oo hodan ku ah humus. Meesha ugu fiican ee koritaanka cawska noocan oo kale ah waxay noqon doontaa meelaha qoyan ee qoyan iyo cawska beerta, digirta, dhoobada ama carrada qashinka ah. Warshadu waxay u nugul tahay abaar la'aan, waxa ugu muhiimsan ee koritaanka iyo horumarinta guuleysta waa heer ku filan oo qoyaan iyo nalalka iftiinka qoraxda.
Waa muhiim! Inkasta oo foxtail qulqulatadu aysan ahayn mid madaxbannaan, daryeel aan habooneyn oo ku fashilantay in ay u hoggaansamaan sharciyada oo dhan waxay horseedi karaan luminta luuqada iyo quruxda dabiiciga ah.
Foxtail wuxuu ku dhacaa laba siyaabood: xidideynta ama xididka. Dabcan, habka ugu horreeya waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee beerta, maxaa yeelay waa wax sahlan oo dhakhso badan si ay u iibsadaan loona dhajiyo lakabyada rukummada ka badan si ay u koraan badarka miraha, kaas oo qaadanaya qiyaastii afar sano celcelis ahaan.
Cawska cawska wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood:
Marxaladda diyaarinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu fuliyo beerashada iyadoo la adeegsanayo geeddisishnimada.
Laba toddobaad kadib daaweynta, ciidda waa in la xoqo.
Haddii aad ka soo baxdo warshad laga bilaabo abuur, ka dibna ku beeraan xitaa saf. Waxaad isticmaali kartaa labadaba daboolka iyo lakabaadda.
Waa muhiim! Haddii aad rabto in aad cawska ka baxdo foxtail, markaas ugu yaraan 350 dhirta noocan ah waa in lagu dhajiyaa hal mitir oo laba jibbaaran.
Sida loo daryeelo dhaqanka
Daryeelka noocaas oo kale ah waxay ka kooban tahay waraabin joogto ah, bacriminta iyo beerashada.
Ku waraabinta dalagyada foxtail waa inay noqdaan kuwo joogto ah, sida dhoobada sare. Dhirta had iyo jeer waxay u baahan tahay qoyaan: xitaa la'aanta yaraanta qoyaanka waxay keeni doontaa xaalad xumad iyo muuqaal.
Bacriminta cawska waa in la fuliyaa ka hor bilowga xilli sii kordhaya. Ku dar Bacriminta macdanta ee soo socda: Superphosphate - 3 centen, Bacriminta potash - 1 mitir, lagu xisaabiyaa 1 hektar oo ah beerashada. Bacriminta Nitrogan sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa, Nitrate ammonium ee xisaabinta 1 mitir halkii 1 ha.
Dhamaadka dhammaadka June ee abuurka foxtail u bislaadaan. Waa in lagu nadiifiyaa oo kaliya marxaladda bislaanshaha ee dalagga la siiyey. Muddada noocan oo kale ah waxaa lagu go'aamiyaa si sax ah oo midabkeedu yahay midhaha geedka laftiisa, marka uu helo cagaar cagaaran. Isla mar ahaantaana, abuurka qaar ka mid ah shakhsiyaadka afkoda waxay bilaabaan inay u boodaan. Seeds yihiin iftiin, flat, xuub ah, oo leh waxyaabo yaryar oo adag.
Muuqaal muhiim ah oo ka mid ah goosashada foxtail waa in la samayn karo oo kaliya sanadka labaad ee fruiting. Sidoo kale fiiro u yeelo ujeedada beergooyska. Haddii aad rabto in aad u isticmaasho hay, ka dibna samee laba ururinta, haddii diyaarinta cuntada cows, ka dibna guud ahaan waxaa jira saddex. Waxay ku xiran tahay heerka koritaanka iyo dhererka badarka. Xakameyntu waxay si dhakhso ah u dhici doontaa haddii foxtail la jarayo uu leeyahay dherer ah ugu yaraan 5 cm.
Ha iloobin sidoo kale in goosashada loo baahan yahay daaweyn gaar ah. Si aad u kala saarto waxyaabo badan oo qashin-xareeyeen oo yar yar, samee nadiifin adag oo ah cayayaanka siriyaalka. Haddii ceelku uu yar yahay qoyan, waxaad u baahan tahay inaad ku qaadato qalajinta iyada oo la adeegsanayo hawo-qaadashada. Taas ka dib, nadiifinta koowaad iyo kan ugu muhiimsan ee foxtail la uruuriyey ayaa la samayn karaa.
Markaad ka baratay faahfaahin dheeraad ah oo aad ku baratay sharraxaadda noocan oo kale ah sida foxtail cagaaran, mid ayaa soo saari kara tiro badan oo ka mid ah arrimaheeda wanaagsan: biqilka fiicnaanta, wax qabad la'aan iyo codsiyo badan oo kala duwan. Adiga oo dooranaya cawska sida beertaada ku koraya, waxaad heli doontaa oo kaliya qurxinta qurxinta quruxda badan, laakiin sidoo kale dharka sare ee nafaqada ee xoolaha, iyo sidoo kale warshad leh hanti daweyn iyo kuwo ka hortag ah.